Daawo:Guur Ayuu Ugu Soo Bandhigtay Suuq Gudihii.. Gabadhii uu Jeclaa Wuu Helay.. Laakiin Dhaqankiisa Ayaa Xabsi Geeyay | Baahin Media
Daawo:Guur Ayuu Ugu Soo Bandhigtay Suuq Gudihii.. Gabadhii uu Jeclaa Wuu Helay.. Laakiin Dhaqankiisa Ayaa Xabsi Geeyay
Mar 12, 2019 - jawaab
Farxadda wiil dhalinyaro ah iyo gabar uu jeclaa ayaa hal mar waxey isku bedeshay cabsi iyo murugo, kadib markii ay boolisku xireen, waxa uu ku eedaysan yahay inuu dhaqan uu ka soo minguuriyay reer galbeedka gabadha guur uga dalbaday.
Wiilkan dhalinyarada ah ayaa guur ka codsaday gabadha uu jeclaa iyagoo wada jooga xarun gacansi oo ku taalla magaalada Aaraak ee dalka Iiraan, waxa uu sii diyaariyay goobta oo uu ubaxyo si wanaagsan oo kalgaceyl leh ugu sii xardhay.
Markii gabadhu ay guurka ka ogolaatay ayey laabta is geliyeen iyagoo dadku ay u sacbinayaan si weynna ay ugu faraxsanayeen lamaanahan jacaylkooda ku guuleystay.
Ilbiriqsiyada ay faraxsan yihiin ayaa laga duubay muuqaal ku faafay baraha bulshada, laakiin isla markii goobta waxaa soo gaaray ciidanka booliska oo xabsiga u taxaabay wiilkii iyo gabadha iney is-guursadaan ku heshiiyay. boolisku waxey ku doodayaan iney ku dhaqmeen anshax xumo meel fagaare ah oo ay dadku ka buuxaan, kaas oo ah fal laga soo dheehday dhaqanka reer galbeedka ee aan akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan waafaqsaneyn.